Marko 13 NA-TWI - Asɔredan no sɛe - Yesu refi asɔredan - Bible Gateway
Marko 13 Nkwa Asem (NA-TWI)
Asɔredan no sɛe
13 Yesu refi asɔredan no mu hɔ no, n’asuafo no mu baako kae se, “Kyerɛkyerɛfo, adan yi yɛ fɛ papa. Hwɛ sɛnea wɔde abo asiesie afasuw no.” 2 Yesu ka kyerɛɛ no se, “Ɛyɛ nokware de, nanso wobedwiriw saa ɔdan yi agu pasaa.”
3 Bere a ɔte Ngo Bepɔw no so a n’ani tua Yerusalem no, Petro, Yakobo, Yohane ne Andrea baa ne nkyɛn bebisaa no se, 4 “Bere bɛn na nea woreka fa asɔredan yi ho no bɛba mu. Na nsɛnkyerɛnne bi bedi kan aba ansa anaa?”
5 Yesu nso buaa wɔn se, “Monhwɛ yiye na obi annaadaa mo. 6 Nnipa bebree de me din bɛba abɛka se wɔne Agyenkwa no, na wɔadaadaa mo mu pii. 7 Akokoakoko besisi mmaa nyinaa nanso ɛnyɛ ɛnonom ne awiei no ho nsɛnkyerɛnne.
8 “Aman bɛsɔre aman so, na ahenni asɔre ahenni so, na asasewosow ne ɔkɔm bɛba mmeaemmeae. Eyinom nyinaa bɛyɛ nneɛma a ɛyɛ hu a ɛbɛba no mfitiase. 9 Nanso sɛ eyinom fiti ase sɛ ɛreba a, monhwɛ yiye! Mobɛkɔ ɔhaw akɛse mu. Esiane sɛ mudi m’akyi nti, wɔbɛtwe mo akɔ asɛnnii; wɔbɛhwe mo wɔ asɔredan mu, na wɔaka nsɛm agu mo so wɔ ahemfo ne mpanyimfo anim. Saa bere no ne bere pa a ɛsɛ sɛ moka Asɛmpa no kyerɛ wɔn. 10 Na ɛsɛ sɛ Asɛmpa no di kan du ɔman biara so ansa na awiei no aba. 11 Na sɛ wɔkyere mo de mo begyina asɛnnii a, munnnwen nea mobɛka de ayi mo ho ano ho. Monka nea Onyankopɔn bɛkyerɛ mo sɛ monka no. Na ɛnyɛ mo na mobɛkasa, na Honhom Kronkron no na ɔbɛkyerɛ mo nea monka.
12 “Onua beyi onua ama sɛ wonkum no; agyanom nso beyi wɔn mma ama; mma nso beyi wɔn awofo ama sɛ wonkum wɔn. 13 Na esiane sɛ moyɛ me de nti, nnipa nyinaa bɛtan mo. Nanso wɔn a wobegyina pintinn akodu awiei no, wobegye wɔn nkwa.
14 “Enti sɛ muhu akyide a ɛbɔ ɔman wɔ asɔredan mu hɔ a, ɔkenkanfo, hwɛ yiye! Wɔn a wɔwɔ Yudea no nguan nkɔ mmepɔw no so. 15 Wɔn a wɔwɔ wɔn afi mu no nguan a wɔnnsan nnkɔ fie hɔ bio nnkɔfa biribiara mmfi hɔ. 16 Wɔn a wɔwɔ mfum no nso nnsan wɔn akyi mmmɛfa sika anaa ntama wɔ fie.
17 “Na wɔn a wɔafa afuru ne wɔn a woturu mma saa bere no mu no nnue. 18 Na mommɔ mpae na bere a ɛsɛ sɛ muguan no anyɛ awɔwbere. 19 Na ahohia a ɛbɛba saa mmere no mu no, efi bere a Onyankopɔn bɔɔ ade no, ebi nsii da, na ebi nso rensi da. 20 Gye sɛ Awurade twa saa amanehunu no so, anyɛ saa a, ɔkra baako koraa rentena ase. Nanso esiane wɔn a wɔayi wɔn no nti, obetwa nna no so.
21 “Na sɛ obi ka kyerɛ mo se, ‘Agyenkwa no ni’ a, mummmua. 22 Wɔn a wɔnam nnaadaa so ka se wɔne Kristo no ne adiyifo no bɛsɔre wɔ mo mu, na wɔayɛ anwonwade ahorow, na sɛ ebetumi a, wɔadaadaa Onyankopɔn no ara ankasa mma. 23 Monhwɛ yiye, efisɛ, maka biribiara akyerɛ mo!
24 “Ahohia no akyi no, owia beduru sum, na ɔsram renhyerɛn, 25 na nsoromma bɛtetew ahwe, na wɔbɛwosow tumi a ɛwɔ wim no. 26 Na nnipa nyinaa behu me, Agyenkwa no, sɛ mede tumi ne anuonyam nam omununkum mu reba. 27 Na mɛsoma m’abɔfo akɔ wiase mmaa nyinaa, fi soro ano akɔka asase ano, na wɔabɛboaboa wɔn a mayi wɔn no ano.
28 “Afei, merebɛka asɛm bi a ɛfa akutu dua ho a ɛbɛma mo osuahu bi akyerɛ mo. Sɛ eyi baa foforo san yi ahaban foforo a, na ɛkyerɛ sɛ asusow atue. 29 Sɛ muhu sɛ saa nneɛma yi a maka ho asɛm akyerɛ mo yi nyinaa afiti ase resisi a, mubehu sɛ me ba a mɛsan aba no abɛn.
30 “Afei nokware ni, wɔn a wɔte ase saa bere yi mu no nyinaa renwuwu kosi sɛ saa nsɛm yi besisi. 31 Ɔsoro ne asase betwam akɔ, na me nsɛm de, ɛrentwam da.
32 ”Nanso, da anaa dɔn ko a awiei no bɛba de, obiara nnim. Ɔsoro abɔfo ne me ankasa mpo nnim. Agya no nko ara na onim. 33 Esiane sɛ munnim bere ko a asɛm yi besi nti, munsiesie mo ho. Monwɛn, ntwɛn me ba no.
34 “Me ba no te sɛ ɔbarima bi a otuu kwan kɔɔ ɔman foforo bi so. Ɔrebɛkɔ no, ɔkyerɛɛ adwuma a n’apaafo nyɛ. Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne wɛmfo nso se, ɔnwɛn hɔ yiye nkosi sɛ ɔbɛba.
35 “Enti, mo nso monwɛn, efisɛ, munnim bere ko a ofiwura no bɛba. Ebetumi aba sɛ ɔbɛba anwummere, ɔdasum, ahemanakye anaa awia. 36 Sɛ ofi mu ba a, ɛnsɛ sɛ ɔbɛto mo sɛ moadeda. 37 Asɛm a mede agyaw mo ne nnipa nyinaa ni. Monwɛn.”